Japana : Fanehoankevitra Manoloana Ilay Lazaina Fa Fanolanàna Tao Okinawa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Avrily 2018 12:40 GMT
Nahatonga fiampangàna maro avy amin'ny mponina tao an-toerana, avy amin'ny politisiana, ary amin'ny governemanta sy ireo blaogera [ja] ilay vaovao tamin'ny herinandro farany teo izay nanambara fa nanolana mpianatra iray vao 14 taona monja tao Okinawa ilay “sergent” Tyrone Hadnott avy amin'ny “Marine” Amerikàna, nandrehitra ny hatezerana koa ny mbola fisian'ny toby miaramila Amerikana ao amin'ny Prefektiora farany atsimo ao Japana. Na tsy mitovy amin'ilay tranga ankehitriny aza, mbola tadidin'ny mponina maro ao Okinawa foana ilay fanolanana faobe nataonà andian-tafika Amerikana tamin'ny 1995 izay vao mainka manampy trotraka ny hatezerana.
Ho famaritana ny trangam-panolanana toy ity iray ity ao Japana, matetika ny haino aman-jery miala amin'ny teny hoe “fanolanana” (強姦) manolo izany amin'ny teny maivana tsy dia mivantana hoe “herisetra” (暴行). I Uesugi Takashi, mpanao gazety miasa tena sady bilaogera, dia naneho hevitra momba ity fampiasana fiteny iray ity, ary manambara ny fahasamihafana eo amin'ny haino aman-jery eto an-toerana sy ny iraisam-pirenena amin'ny famoahana ilay raharaha :
Heloka hafa ara-nofo nataon'ny “Marine” Amerikana.
Tsapako ny fahasamihafana misy eo amin'ny “Okinawa Times”, izay namoaka vaovao fanampiny, ary ny tatitra mangatsiatsiaka avy any amin'ny tanibe momba izany.
[Ny hoe tatitra mangatsiatsiaka avy any amin'ny tanibea] miresaka azy io ho toy ny “herisetra natao tamin'ny zatovovavy” (少女暴行), saingy raha lazaina tsotra, “fanolanana zaza tsy ampy taona” ilay izy (未成年者への強姦).
Moa tena ilaina ve ny fanalefahana ireo teny ireo sy ny filazàna azy io ho “herisetra” (暴行)? Amin'ny fampiasàna teny toy ny hoe “fifamotoanana misy tamby ara-bola” sy ny hoe “herisetra atao amin'ny zatovovavy” ho fiantsoana heloka bevava ara-nofo, ary raha toa ka tokony hihantra ilay niharam-boina ny fampahalalambaovao Japoney , dia vao mainka mampihena ny fahatsapan'ilay nanao herisetra ho diso.
Tokony hisy fiovàna toetsaina manoloana ny olona iray izay tena tsy manaiky velively ny karazana heloka bevava tahaka ity.
Na nisy fifanoheran-kevitra marobe aza mahakasika ny fisian'ireo miaramila amerikana, tanaty fipentsopentson'ny Aterneto nisy nanao tsikera mavesatra namely ilay ankizivavy mpianatra ihany koa [ja] ho noho ny tsy fitandremany tsara sy ny famelany io tranga io hiseho. Blaogera iray, ohatra, no nanoratra mikasika ny “hamaolamaolàn” ilay tovovavy :
Ilay fanolanana mpianatra nataon'ny miaramila amerikana tao Okinawa.
Raha mihaino tsara ianao :
Nanontaniana izy raha te-haterina hody amin'ny môtô,
Ary dia niakatra marina tokoa teo amboniny izy, izany no antony.
Ny zavatra toy izany, dia toy ny miteny hoe : aholano aho azafady.
Tsy misy fomba hamaritana izany afa-tsy ny fihetsika maolamaola hangatahana tsotra fotsiny izao ny hisian'ny zavatra hitranga.
Tena mahasosotra ahy ny famaolamaolan'ity tovovavy ity.
Naneho fihetsehampo toy izany koa ilay blaogera VcCS :
Tao amin'ny prefektioran'i Okinawa, nisy tranganà fanolanana hafa indray nataon'ny miaramila Amerikana !
Niditra tao anaty fiara ny zazavavy iray mpianatra amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, ary voaolana tao anatiny. Tokony hotazonina ho tompon'andraikitra tamin'io heloka bevava io ilay miaramila amerikanina, saingy manontany tena ihany koa aho mikasika ny zotra nitondra ho amin'io heloka io.
Tsy te-hiaro ilay miaramila amerikana izay niantso azy [hiditra anaty fiara] aho.
Fa ilay tovovavy mpianatry ny lisea izay niharan'ny herisetra, raha niantso azy ilay miaramila amerikana, nanaiky io fanasana io izy ka toy ny hoe nangataka izany [hitranga] ihany. Hafa indray raha olom-pantany ilay izy, nefa tsy haiko ny tsy hihevitra hoe misy olana ny olona manaiky fanasana avy amin'ny olona tsy fantany akory.
Amin'ny toerana misy an'i Okinawa [*], tsy mitsahatra mihitsy ny trangana fanolanana ataon'ireo miaramila Amerikana ireo.
Ary izany indrindra no tokony hitandreman'ireo ankizivavy any amin'ireny toerana ireny ! Mihoatra noho izany aza, tsy tokony handray andraikitra bebe kokoa amin'ny zanany ve ny ray aman-drenin'izy ireny ?
Tiako ny mba handraisan'izy ireo lesona avy amin'ny zava-nitranga teo aloha ary handraisany andraikitra misimisy kokoa.
Satria na ho voampanga aza ilay nanao herisetra, tsy misy fomba hanesorana ny holatra zakain'ireo niharam-boina!
[*] ilazàna ny fananan'i Okinawa toby miaramila amerikana maro.